दुब्लो हुनुहुन्छ ? यी खानामा ध्यान दिनुस् – Online Bichar
दुब्लो हुनुहुन्छ ? यी खानामा ध्यान दिनुस्
Online Bichar 4th March, 2019, Monday 9:09 AM
काठमाडौं, २० फागुन । मोटोपन अधिकांशका लागि समस्या होला ! तर, कतिपय मानिस दुब्लोपनका कारण चिन्तित हुन सक्छन् । तौल बढाउन सजिलो मानिए पनि केही मानिस भने आवश्यक तौलसमेत नभएका कारण चिन्तित छन् । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन निम्न खानेकुराको सेवन गर्न आवश्यक छ ।
डिप्रेसनलगायत मानसिक समसया र मधुमेह आदिका कारण पनि तौल घट्ने हुन्छ । केरा खाएमा यस्ता समस्याबाट छुटकारा मिल्न सक्छ । यसमा पाइने पौष्टिक ततवले समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ । साथै, केरा ऊर्जावद्र्धक फल पनि हो ।